Sayensi Izibheno & Iimpawu
Mhlawumbi uye wambona i-NFPA 704 okanye idayimni yomlilo kwizikhumbisi zamachiza. Umbutho weSizwe woKhusela uMlilo (i-NFPA) e-United States isebenzisa umgangatho obizwa ngokuba yi-NFPA 704 njengetekisi yengozi yemichiza . I-NFPA 704 ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba "idayimani yomlilo" ngenxa yokuba uphawu lwedayimani lubonakalisa ukutshabalalisa kwezinto kunye nolwazi olubalulekileyo malunga neendlela zamagosa okuphendula ngokukhawuleza kufuneka zijongane nezinto ezifanelekileyo xa kukho ukutshala, umlilo okanye enye ingozi.
Ukuqonda iDamantoni yoMlilo
Kukho amacandelo amane ombala kwidayimane. Icandelo ngalinye libhalwe ngenani ukusuka ku-0-4 ukubonisa izinga leengozi. Kule nqanaba, i-0 ibonisa "akukho nengozi" ngelixa 4 ithetha "ingozi enkulu". Icandelo elibomvu libonisa ukutsha . Icandelo eliluhlaza lubonisa umngcipheko wempilo. Ephuzi kubonisa ukusetyenziswa okanye ukuqhuma. Icandelo elimhlophe lisetyenziselwa ukuchaza nayiphi na ingozi ekhethekileyo .
Uphawu loKhuseleko olungakumbi
Iibhendi zokuPhepha eziPapasho
Ukugcinwa kweMpawu zoKhuseleko lweMichiza
Imiqondiso Yobungozi kwiNFPA 704
Uphawu kunye neNombolo Nentsingiselo Umzekelo
Blue - 0 Ayifaki ingozi yempilo. Akukho zikhuselo eziyimfuneko. amanzi
Blue - 1 Ukubonakaliswa kungabangela ukucaphukisa nokulimala okuncinci. i-acetone
Blue - 2 Ukunyanzeliswa okungapheliyo okanye okuqhubekayo kungabangela ukungaphumeleli okanye ukulimala kokusalela. ethyl ether
Blue - 3 Ukutshatyalaliswa okufutshane kunokubangela ukulimala okwexesha elifutshane okanye elincinci. i-klorine igesi
Blue - 4 Ukubonakaliswa okufutshane kakhulu kunokubangela ukufa okanye ukulimala okutsha. sarin , i-carbon monoxide
Olubomvu - 0 Andiyi kutshisa. umoya omdaka
Olubomvu - 1 Kumele utyumke ukuze uphephe. Iphoyinti yeFlawuza idlula 90 ° C okanye i-200 ° F ioli
Olubomvu - 2 Ukushisa okulinganayo okanye ukushisa okuphezulu kakhulu kuyafuneka ukutshaya. I-flash point phakathi kwe-38 ° C okanye i-100 ° F no-93 ° C okanye i-200 ° F dizeli
Olubomvu - 3 Iziqu okanye iziqulatho ezithintela ngokukhawuleza kwiimeko ezininzi zokushisa. Iimpawu eziqulethwe ngezantsi ziphantsi kwe-23 ° C (73 ° F) kunye nenqaku lokubilisa okanye ngaphezulu kwe-38 ° C (100 ° F) okanye iphoyinti ye-flash phakathi kwe-23 ° C (73 ° F) no-38 ° C (100 ° F) i petroli
Olubomvu - 4 Ngokukhawuleza okanye ngokuphefumula ngokupheleleyo kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo kunye noxinzelelo okanye ngokukhawuleza lihlakazeka emoyeni kwaye litshise ngokukhawuleza. Iphoyinti ye-Flash phantsi kwe-23 ° C (73 ° F) i-hydrogen , propane
Ephuzi - 0 Ngokusemgangathweni ngokuzinzileyo nangona ebonakalayo emlilweni; asebenzisanga ngamanzi. helium
Ephuzi - 1 Ngokuzinzile zizinzile, kodwa zinokubakho ukushisa okuphezulu okuzinzileyo kunye noxinzelelo. propene
Ephuzi - 2 Utshintsho ngokukhawuleza kwiqondo lokushisa eliphakamileyo kunye noxinzelelo okanye uphendule ngokugqithiseleyo ngamanzi okanye udibanise umxube wokuxhamla ngamanzi. i-sodium, i- phosphorus
Ephuzi - 3 Ngamana angamhlambalaza okanye ahlawule ngokutshabalalisa phantsi kwesenzo somqalo oqinileyo okanye uphendule ngokugqithiseleyo ngamanzi okanye ahlasele phantsi kokutshatyalaliswa okukhulu. i-ammonium nitrate, i-chlorine trifluoride
Ephuzi - 4 Ngokukhawuleza ihlaselwa ngokugqithisa okanye ikhupha ngokushisa okuqhelekileyo kunye noxinzelelo. TNT, nitroglycerine
White - OX oxidizer i-hydrogen peroxide, i-ammonium nitrate
White - W Iyancipha ngamanzi ngendlela eyingozi okanye engaqhelekanga. i-sulfuric acid, i-sodium
White - SA igesi elula Kuphela: i-nitrogen, i-helium, i-neon, i-argon, i-krypton, i-xenon
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeNcwadi P
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngee-Letters U ne-V
Iipropati zeNsimbi kunye neMbali
Iindlebe zeBhukumi: KwiNtloko okanye ngeSkull?
Quicon Tyson Quotes
Indlela yokwenza uVavanyo lweXinzelelo kwiInjini yakho
Indlela Iqhwaba Eyona Iqhwala Iphuma Ngetyuwa?
Ingqwalasela yeendawo ezingabonakaliyo
Ukuvukela kukaShays ka-1786
Indlela yokufumana iDrum ebomvu